Rome bụ n'ụlọ ka onye nke kasị mma ice ude parlors na Europe, dị ka mmiri ara. The obodo jupụtara ice ude hụrụ. Ebe nseta nke ndị mmadụ na-ekpori ndụ gelato bụ ahụkarị. Otú ọ dị, na a obodo na-apụghị ịgụta ọnụ gelato ụlọ ahịa, onye guzo dị ka a zoro ezo mkpuru na ọ bụla gelato hụrụ n'anya kwesịrị ileta. Ọtụtụ ndị njem nleta na obodo enubata Bịa Il latté. Gịnị nwere ike ime ka ha ice ude otú pụrụ iche i nwere ike ịjụ? Firstly, ọtụtụ ndị na-enwe ndị ọgaranya na-atọ ụtọ flavors ha na-enye. Ha na-akwadebe ha gelato kwa ụbọchị na-eme ka ojiji nke eke Efrata. Ha ice creams bụ ọgaranya na creamy, dị ka aha na-atụ aro. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe Bịa Il latté n'aka, ị ga-enwe obi ụtọ ịmata na ọ sụgharịta ka “dị ka Mmiri ara ehi”. Ọbụna ndị kpọrọ mmiri ara ehi asị nwere ike iri ụtọ mmiri ara ehi na-enweghị mmiri ara ehi. The uto bụ ịtụnanya. Nke abuo, ndị mmadụ ife ikuku nke shop. Ọ na-agụnye nke kachasi mkpa na obi na-adị nke Rome.
Fantastic ice cream abụghị ihe ọtụtụ ndị na-akpakọrịta na Germany. Otú ọ dị, Ballabeni Ihe nracha bụ ebe a na-agbanwe na na ya ịrịba Scoops. Nke a pụtara ìhè ice ude parlor ice dị na Munich ma nwee ọtụtụ ihe na-esonụ. The parlor bụ nke Giorgio Ballabeni, a grandmaster na nkà nke na-eme ka ice ude. Ọ malitere ice cream dị ka ihe ntụrụndụ, na niile nke Munich bụ ekele maka ya. Ọtụtụ ndị njem na obodo n'anya ụlọ ahịa, na -ahapụ nyocha dị ịtụnanya. Mgbe ị na-agbalị ha ice ude, ọ bụghị ike ịhụ ihe mere. Ha honed ha craft okè na bụ otu n'ime ndị kasị mma na ha na ubi. Ha ahuhu-abịa site ọ bụla scoop. Ihe ọzọ bonus bụ na ha nwere ha ice ude ụgbọala na ike ihe ike na onwe ọzọ!
Ọ bụrụ na ị chọpụta na ị na na isi obodo nke Hungary, eme ka n'aka gaa Gelarto Rosa. A na-eju ice ude ụlọ ahịa dị na obi nke Budapest. Ha niile bụ ihe na omenala, mmekọrịta chiri, romance, na ahuhu, nke anya na-arụ ọrụ ha. Yabụ, ha bụ ezi ndị ọkachamara na ubi. Dị ka ha ice ude, ị ga-enwe obi ụtọ na-anụ na ha na-eji nanị ndị kasị mma organic Efrata. Ukwu ọ bụla ice ude shop ezere wuru ice ude. Otú ọ dị, ihe na-eme Gelarto Rosa pụrụ iche bụ na ha ọrụ aka obibia n'ịkpụzi na ice ude n'ime a rose. Ọ bụrụ na ịnọ na Szent Istvan Square n'oge ụbọchị na -ekpo ọkụ, ị ga-ejide n'aka na ị ga-ahụ ọtụtụ ndị nwere ice cream-yiri ice na-agagharị.
Njikere na-enweta ndị na-amasị na flavors na Europe nwere na-enye? AKWỤKWỌ gị Train Tickets ugbu a. Mgbe nke ahụ mechara, i nwere ike na-enweta na-atọ ụtọ ụwa nke ice ude na Europe.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Places Iji Rie Ice Ude Na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-eat-ice-cream-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#wetuo obi #ihe nracha #traveleurope eurotrip Foodie